Waxaa Lagu Bilaabaa Codsi Taksi Smart in Gaziantep | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Waqooyi-galbeed ee Anatolia27 GaziantepHirgelinta Codsiga Taksi Taksiga ee Gaziantep
08 / 01 / 2020 27 Gaziantep, Gobolka Waqooyi-galbeed ee Anatolia, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, TURKEY
gaziantepte codsi tagsi smart ayaa nolosha yimaada
Iyada oo la kaashanayo Dawladda Hoose ee Gaziantep, Rugta Wadayaasha iyo Gawaarida, ayaa markii ugu horreysay lagu gaadhay baaxadda leh Gaadiidka 'Smart Transportation'.
Fatma Şahin, Duqa Magaalada Caasimadda, waxay la kulantay Ünal Akdoğan, Madaxa Rugta Darawalada iyo Gawaarida, si loo hirgaliyo codsiga "Smart Taxi". Kulankii qiimaynta lagu sameeyay baaxadda shabakadda gaadiidka magaalooyinka, ayaa daraasad muunad la soo saaray. Sidaas awgeed, si loo helo adeegyo wanaagsan muwaadiniinta doorbidaya taksi xagga gaadiidka, ayaa la soo bandhigi doonaa nidaamka Karti Kaadhka Gawaarida. Qaabkaan, waxaa loola jeedaa in laga hortago dhibaatada aaminka oo ah dhibaatooyinka ugu waaweeyn ee laga soo arko magaalooyinka waaweyn.
ŞAHİN: SHAQAALAHA PILOT WAA Bilaabmidoonto hadda
Duqa magaalada Fatma Şahin ayaa sheegay inay sameeyeen daraasad tusaale ah oo ay si wada jir ah u wada qabteen Rugta Darawalada iyo Gawaarida. Waxay doonaysaa kaabayaal. Annaga oo bixinayna kaararka darawalladayada 'darawallada', waxaan ku abuurnay kaabayaasha howlaha taksi-ka smartka ah halkaas oo macluumaadka oo dhan lagu heli karo hal kaar. Qarnigii 21-aad waa qarnigii xogta. Hadaanan keenin macluumaadka wada jirka, hamigeenna kama gudbi karo hamiga iyo rabitaanka. Madaxweynaha Rugta Darawallada Gawaarida iyo Unal Akdogan iyo kooxda Dowladda Hoose ee Magaaladda ayaa abuuray kaabayaasha loogu talagalay hirgelinta mashruucan. Qaab dhismeedka ugu weyn ee tan, iyadoo la adeegsanayo qalabka iyo softiweerka si loo hubiyo in muwaadiniinta tagsiga ay helaan dhammaan macluumaadka ay doonayaan. Dhisidda aaminaadda waxay kaloo keentaa gaadiid ku habboon oo nabad ah. Sidaa darteed waxa ugu muhiimsan ee magaalooyinka caqliga leh ayaa ah in laga takhaluso dhibaatooyinka la adeegsanayo tikniyoolajiyadda. All noqon doontaa tusaale lagu Turkey dhaqan galin doonta mashruucan wakhtiga dhow. Waxaan higsaneynaa inaan mashruucan ku fidino Gaziantep 2 bilood gudahood. Duuliyaha ayaa sida ugu dhakhsaha badan u bilaaban doona.
WAA INAAN BADBAADI KARNAA DADKA AMMAANKA
Madaxweyne Fatma Sahin, Madaxweyne Recep Tayyip Erdo pointedan wuxuu tilmaamay iyada oo la ilaalinaayo magaalooyinka caqliga leh, ayaa yiri: “Haatan, waxaan ku noolahay adduunka macluumaad iyo teknolojiyad. Qof kasta oo adeegsada tikniyoolajiyada iyo macluumaadka sifiican, wuxuu ku gaadhaa heer aad u wanaagsan jawiga tartanka. Hadaf ahaan waxaan leenahay hadaf ahaan. Waxaan higsaneynaa inaan noqonno dhaqaalaha 10aad ee adduunka. Sidaa darteed, waa inaan si wanaagsan u maareeynaa dhaqaalaha aqoonta. waxbarashada ee magaalooyinka smart muuqaal ah degmooyinka oo dhan Turkey sida Madaxweynaha Midowga hoose ee Turkey waxaan rabnaa in aan si ay u fuliyaan. Dhanka kale, waxaan dhiiri galin doonaa Teknolojiyada Ankara bisha Janaayo 15keeda si aan u hubinno in dhammaan degmooyinka ay sifiican uga faa’iideysan karaan teknolojiyadda. Cinwaanka ugu muhiimsan ee magaalooyinka caqliga leh waa gaadiid smart. Nolosha dadka waxay si toos ah ula xiriirtaa gaadiidka magaalooyinka waaweyn. Gaadiid nabdoon, gaadiid raaxo leh, oo mid kastaaba uu si toos ah ugu saleysan yahay tikniyoolajiyadda. Maanta waxaan u ordaan software ugu fiican Turkiga iyo hardware. 500 kun oo qof ayaa soo degsaday codsigan. Waxaan ku soo marnay wado dheer oo gaadiid casri ah sanadkii lasoo dhaafay. Muwaadiniinteenna ka yimid magaalo kale oo leh kaarka deynta ayaa si sahal ah oo siman ugu safri kara gaadiidka dadweynaha ee magaalada. Waxaan u baahanahay inaan badinno dhibicdii aan gaarney si aan u gaarno meel sare.
AKDOĞAN: NOBODY waxay ku soo degtaa magaalo iyada oo aan loo kala eexan karin
Ünal Akdoğan, oo ah Gudoomiyaha Rugta Darawalada iyo Gawaarida, ayaa yiri, s Darawal Taksi wuxuu meel muhiim ah kayahay nolosheena. Nolosha ganacsiga, taksi waa mid kamid ah dariiqyada lama huraanka ah ee loogu talagalay dadka ku nool goobaha bulshada. Sababtaas awgeed, sida Gaziantep, waxaan u baahan nahay inaan marka hore saxiixno. Waxaan higsaneynaa inaan siino adeeg aad u wanaagsan oo aamin ah oo loogu talagalay muwaadiniinta timid Gaziantep ama ku nool magaalada. Ma jiro booqde ku soo booqda magaalo ay aaminnimadu aan joogto ahayn. Mashruucan waxaan qorsheyneynaa inaan hirgalinno; muwaadin ku lumay boorsadiisa tagsi waxay ku heli doontaa raaxo weyn helida alaabada luntay. Waxaan go'aan ka gaari doonnaa annagoo fiirinayna gawaarida ay yihiin taksiyada ku shaqeeya wadada. Markaa, waxaan siin doonnaa gaadiid aamin ah dadka Gaziantep. Haddii ay dhacdo wixii hanti luntay, waan hawlgelin doonnaa. Kadib markaan soo sheegno shaygii lumay, waxaan u gaarsiin doonaa milkiilaha sida ugu dhaqsaha badan. Waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo Duqa Magaalada Fatma Şahin, Duqa Magaalada Magaala-Weyne, oo naga taageeray qaabkan ..
FADILOĞLU: HADII AANAN KU SAMEYN KARIN US
Sehitkamil wareejinta in ay qabtaan shir muhiim ah la Duqa of Ridvan Fadıloğlu oo dhan Turkey iyo Gaziantep Metropolitan degmada Head Fatma Sahin Drivers hoggaanka iyo Vehicle Madaxweynaha Chamber Unal Akdoğan'l iyo kooxo shaqo, "yimaado gaadiidka caqli sidoo kale raacay magaalada smart . Hadeysannan cusbooneysiinaynin nidaamka hada jira, waa inaan sameynaa. Sidaa darteed, waxaan u baahanahay inaan la qabsano qalabka farsamada meel kasta oo magaalada ah
Qorshaha Miisaaniyadda Gaadiidka ee sannadlaha ah ee Bursa
Mashruuca gawaarida ee Trabzon ayaa la qabtaa
Xarunta Xarunta Soodhaweynta Xarunta Xarunta Soodhaweynta waxaa lagu bilaabay 2013
Rugta Gaziantep ee Darawalada iyo Gawaarida